Nagarik News - मन-मनमा दसैँ
मीठो–मसिनो खाने, रमाइलो गर्ने र आफन्त भेट्ने- दसैँले नेपालीलाई उपलब्ध गराइदिने अवसर यिनै हुन्। असत्यउपर सत्यको विजयगाथा पनि यस पर्वसँग जोडिएको छ।
दसैँको उमंग कत्तिको छ? हुँदा खानेहरू कसरी मनाउँदै छन् यो ठूलो चाड? घर जानेहरूले टिकट पाएका छन् कि छैनन्? सजना बराल र अम्मर जीसीले नेपालीहरूको दसैँ मुड पक्रन खोजेका छन्।
दसैँ आयो। मान्छेहरू आ–आफ्ना थातथलो फर्किन थालेका छन्। उपत्यकाका बस स्टेसनहरूको व्यस्तता त बढ्ने नै भयो। सोमवार बिहान कलंकी पुग्दा दसैँको चटारो छर्लंङै देखियो। कोही टिकट काट्न व्यस्त थिए त कोही गाडी नम्बर नियाल्दै थिए। चालक तथा सहचालकलाई प्यासेन्जरका सरसामान तह लगाउन भ्याइ–नभ्याइ थियो। यात्रुहरू यता र उता दौडिरहेका थिए। कोही बस तथा माइक्रोभित्र चढिसकेका थिए भने कोही भरिभराउ ब्यागको थुप्रोछेउ उभिएर आफूले टिकट काटेको गाडी पर्खिरहेका थिए।
घर जान हतार
सबैको अनुहारमा उमंग थियो। काठमाडौँदेखि महेन्द्रनगर, कञ्चनपुरसम्मको झण्डै दुई दिन लामो यात्रा सुरु गर्न लागेका पुष्कर बुढा बडो प्रफुल्ल मुद्रामा थिए। दसैँको रमझमले बस यात्राको थकानसमेत भुलाइदिने उनले बताए। 'अरू बेला घर जाँदा गाडी सम्झेरै अत्यास लाग्थ्यो,' उनले भने, 'तर, दसैँको बेला त्यस्तो हुँदैन रहेछ। बाटैभरि दसैँ सम्भि्कइने भएकाले होला थकाइको त वास्तै हुँदैन। पोहोरको दसैँमा पनि सजिलै घर पुगिएको थियो।' निधारमा रातो अक्षता लगाएका उनी परिवारसहित गाउँ फर्किंदै थिए।
'गाडी नम्बर ७०७३ हेर्देऊ त,' बुटवलस्थित दीपनगर जान लागेकी सपना खत्री साथीहरूलाई अह्राउँदै थिइन्, 'यतै छ रे। कहाँ निर पो हो!' सिर्जना गौतम र रेजिना थापा सपनालाई गाडी चढाउन कलंकी आएका थिए। दुवै गाडी खोज्न हिँडे। सपना झोला रुँगेर बसिन्। 'कहिले घर पुगौँलाजस्तो भा'छ,' उनले शुक्रवारसँग भनिन्, 'तीनचोटि त ब्याग प्याक नै गरेँ। १५ दिनअघिदेखि प्याकिङ सुरु गरेकी हुँ।' दसैँका लागि उनले ३५ सय रुपैयाँको सपिङ गरेको पनि बताइन्। 'प्यान्ट, टिसर्ट, ब्याग र जुत्ता किनेँ,' उनले भनिन्, 'यति भएपछि मेरो दसैँ जम्छ यसपालि।'
म्याग्दीका सन्तोष दर्जीले पनि आफूलाई उडेरै घर पुगौँजस्तो लागेको बताए। 'स्कुलका साथीहरू सबै भेट हुन्छन् यतिबेला,' उनले भने, 'केटाहरू मिलेर पिङ हाल्ने गर्छौं। साह्रै रमाइलो हुन्छ। अरू बेला गाउँ जाँदा सुनसान हुन्छ। त्यसैले कलेज छुट्टी हुनासाथ कुदिहालेको हुँ।' उनी मंगलवार नयाँ बसपार्कमा फर्यारकफुरुक गर्दै थिए।
गोंगबुस्थित नयाँ बसपार्कमा भेटिएका नेपालगञ्जका वाहित भाट दुवै काँधमा झोला भिरेर काखीमा कार्टुनको लामो प्याक च्याप्दै र सुकटेस गुडाउँदै कान्तिपुर डिलक्सतर्फ मोडिए। 'कोसेली त टन्नै लान आँट्नुभएछ?' हामीले सोध्यौँ। 'दसैँको लागि कतारदेखि आइहालेको छु,' उनले आफ्नै लवजमा जवाफ फर्काए, 'एउटा–एउटा तोफा त चाहिहाल्छ सबैलाई। कतारबाट ३२ इन्चको एलईडी टीभी पनि ल्याएको छु। काटुर्नमा छ त्यो। यसपाली टीभी हेरेर दसैँ मनाउने सोच छ।' उनी दुई वर्षपछि स्वदेश फर्केका हुन्। दसैँकै लागि भनेर छुट्टी मिलाईवरी नेपाल आएको उनले बताए।
हेटौँडा, सानोपोखराका जीवन पोखरेल पनि यसपालि पाँच वर्षपछि घर आएका हुन्। अध्ययनका लागि लन्डन पुगेका उनी मंगलवार बल्खु बस स्टेसनमा सामान लोड गर्दै थिए। 'विदेशबाट घर आउन पाउँदा यसै पनि एक्साइटेड भइन्छ,' उनले भने, 'त्यसमाथि दसैँको बेला आएको छु, खुशीको सीमै छैन।' उनलाई दसैँमा चंगा उडाउन र मासु–भात खान खूब मन पर्छ रे। 'धेरै पछि परिवारसँग भेट्दै छु,' उनले भने, 'हल्का नर्भसजस्तो पनि भएको छु।'
काठमाडौँ, कपनका विपिन खड्कालाई विराटनगरका लागि १० गतेपछिको टिकट चाहिएको थियो। तर, पाएनन्। 'आजै (६ गते) हिँड्नुपर्योप,' सोमवार गौशाला बसपार्क आएका उनले भने, 'अफिसको कामकाज मिलाउनै बाँकी थियो। लथालिंग छोडेर हिँड्दै छु। अब दसैँपछि मिलाउनुपर्ला सबैथोक।' बंगलामुखी यातायातबाट विराटनगर जान लागेका उनले दसैँका लागि २५ हजार रुपैयाँको किनमेलसमेत गरेका छन्।
लोकल बसमा सिट नपाएपछि चितवनकी नन्दमाया सुनुवार र उनका तीनवटी फुपू अन्य यात्रुसँग मिलेर माइक्रोबस रिजर्भ गर्ने सोचमा थिए। 'रिजर्भमा जान पाए आनन्दै हुन्थ्यो,' नन्दमायाले भनिन्, 'लोकलमा त सास्ती हुन्छ। घटस्थापनापछि रिजर्भ पनि नपाइएला भनेर आजै हिँडेका हौँ।' उनी सोमवार कलंकी बस स्टेसनमा दौडधुप गरिरहेकी थिइन्।
कोटेश्वरस्थित गुगल टिकट बुकिङ काउन्टरका इन्चार्ज शिव ढुंगेलले १० गतेपछिका सबै टिकट बुक्ड भइसकेको बताए। 'क्यूका पाँचवटा गाडी त टिकट खुलेको दुई दिनै प्याक्ड भए,' उनले भने, 'अब एक/दुइटा गाडी थप्ने कि भन्ने कुरा भइरा'छ। हेरौँ के हुन्छ?' नयाँ बसपार्कस्थित फत्तेपुर, बेल्टारतिरको टिकट पाइने काउन्टरका मिलन सुब्बाले पनि १० देखि १६ गतेसम्मका सबै टिकट बिक्री भइसकेको जनाए। '१० गतेअघिका चाहिँ टन्नै बाँकी छन्,' उनले खातै पल्टाएर देखाए, 'हेर्नुस् त, त्यहाँभन्दा उताको एउटै टिकट बाँकी छैन।'
यसपालि कोरिया जानका लागि ईपीएस जाँच दिन आउनेहरूले गर्दा पनि असोज १० गतेपछि गाउँ फर्किनेको ओइरो लागेको हुन सक्ने गुगल काउन्टरका शिवले बताए। '१०, ११ गते जाँच रै'छ,' उनले भने, 'त्यसकै लागि गाउँ–गाउँबाट मान्छेहरू आएका छन्। जाँच सकिएपछि ती सबै गाउँ फर्किन्छन्। त्यसकारण चेपाचेप भएको हुनसक्छ।'
दसैँको मौका छोपी यातायात व्यवसायीले गाडीमा खचाखच मान्छे हुल्ने र मान्छेपिच्छे फरक भाडा लिने गरेको यात्रुहरूको गुनासो छ। 'अरू बेला हजार रुपैयाँमा गइराखेको हो,' झापाकी उषा सुवेदीले भनिन्, 'अहिले १५ सय मागे। तिर्नैपर्यो । त्यही पनि नपाउला भनेर जति भन्यो उति फाल्दिएँ।' उनले तीन दिन नयाँ बसपार्क धाएपछि मात्रै टिकट पाएको बताइन्।
डोटीको गैरागाउँ पुग्नुपर्ने हर्क बोहरालाई पनि टिकट पाउन सजिलो भएन। 'आज राति ३ बजे नै नयाँ बसपार्क गएर लाइन बसेँ,' मंगलवार कलंकीमा गाडी कुरिरहेका उनले भने, 'विद्यार्थी कार्ड देखाउँदा ४५ प्रतिशत छुट पनि पाएँ मैले त। अचम्मै लागिरा'छ।' अरूले लागतभन्दा बढी पैसा तिरेर पनि टिकट नपाइपरहेको बेला कम शुल्कमै सिट पाएकोमा उनी दंग थिए।
काठमाडौँदेखि नारायणघाटसम्मको भाडा तीनदेखि छ सय रुपैयाँसम्म लिने गरेको पाइयो। यो रुटको खास भाडा ४ सय ३६ रुपैयाँ भएको नारायणी यातायात व्यवसायी संघद्वारा सञ्चालित टाटा सुमो सेवाका सहायक इन्चार्ज दिनेश थापाले बताए। काठमाडौँ–वीरगञ्जको भाडा ५ सय ३२ रुपैयाँ भए पनि यात्रुहरूले छसात रुपैयाँसम्म तिरेको बताए। पूर्वतिर पनि यात्रुपिच्छे फरक भाडा लिइने गरेको पाइयो। डिलक्स गाडी चढ्नेले काकडभिट्टा जाँदा १३ सय ७९ र नर्मल गाडीका लागि ११ सय ५३ रुपैयाँ तिर्नुपर्नेमा केहीले डिलक्सका लागि १४ सयदेखि १४ सय ९० रुपैयाँसम्म तिरेको बताए।
'यात्रु आफैँ जति पनि तिर्न लालायित हुन्छन् भने त्यसमा हामीले के गर्न सक्छौँ?' मध्यमाञ्चल यातायात व्यवसायी संघद्वारा सञ्चालित टाटा भिक्टा सुमो सेवाका अध्यक्ष रवीन्द्र पोखरेलले भने, 'रिजर्भ लान खोज्नेले लागतभन्दा पनि बढी दिन्छु भन्छन्। लिन्नँ कसले भन्छ?' तर, क्यूमा चल्ने गाडीमा सरकारले तोकेभन्दा दुई पैसा पनि बढी नलिएको उनको दाबी छ। 'यसपालि दसैँमा भाडा नबढाउने रे,' उनले भने, 'हामीले एज युजल रेटमै सेवा दिइरहेका छौँ।'
भाडादर तलमाथि हुनुमा प्यासेन्जरकै हात हुने सहचालक दिनेश अर्यालले बताए। 'प्यासेञ्जर त डेन्जर पो हुन्छन्,' उनले भने, 'कतिले बढी पैसा तिराएर सिट एक्स्चेन्ज गर्छन् भने कोहीले पहिल्यै चार/पाँचवटा टिकट काटेर गाडी हिँड्ने बेला अरूलाई महँगो रेटमा बेच्छन्। प्यासेन्जर नै दलाल हुन्छन् यहाँ।' घटस्थापनापछि यस्तो चलखल भव्य हुने दिनेशको अनुभव छ।
चालक मोजनाथ पौडलले काठमाडौँ–नारायणघाट रुटको असली भाडा ४ सय ५४ रुपैयाँ भए पनि आफूहरूले ४ सय रुपैयाँमात्रै लिने गरेको बताए। सुर्खेत–काठमाडौँ रुटको ना ५ ख ८२६ नम्बरका गाडी मालिक क्षेत्रमणि गिरी घाटामै गाडी चलाउनु परे पनि खासै दुःखी छैनन्। '४५ हजार खर्च लाग्छ,' उनले भने, 'कमाइ ३८ हजार छ। दसैँका बेला यात्रुलाई अलपत्र पार्नु भएन। एकतर्फी गाडी चलाउँदा घाटा त हुने नै भयो। तर, दसैँजस्तो ठूलो चाडको बेला सेवा दिन पाएकामा हामी खुशी छौँ।'
सोही रुटका चालक धनबहादुर बीसीले अरू बेलाभन्दा दसैँमा गाडी हाँक्दा रमाइलो हुने बताए। 'यो बेला रिस्की पनि हुन्छ,' उनले भने, 'गाडी खचाखच हुन्छ। तर, सबै दसैँका कुरा गर्ने, गीत गाउने मुडमा हुन्छन्। त्यसैले हामीलाई पनि रमाइलै हुन्छ।' यात्रुलाई सेवा दिनुपर्ने भएकाले काठमाडौँ–काकडभिट्टा रुटका किरण लामाले जम्मा एक दिन छुट्टी लिने बताए। 'हामीले नै दसैँ मनाउन थाल्यौँ भने यात्रुलाई कसले वारपार गर्छ?' उनले भने।
दसैँ नजिकिदैँ गए पनि व्यापारीहरूको आङमा घाम लागेको छैन। नयाँ बसपार्क आसपासका व्यापारी गालामा हात लगाइरहेका भेटिए। 'बरु १०/१५ दिनअघि मजाले व्यापार भाथ्यो,' अधिकारी फ्यान्सीका जयराम अधिकारीले भने, 'अहिले त दिनको पाँच हजार पनि उठ्दैन।' कलंकीमा सडक व्यापार गर्ने शंकर शाहको वेदना पनि उस्तै थियो। 'दसैँ लाग्याजस्तो लाग्दैन,' उनले भने, 'व्यापार सुको छैन। दिक्क लागिसक्यो।'
गुरु गोरक्ष सप्लायर्सका शंकर सुवेदीले पोहोर सालको तुलनामा यसपालि ५० प्रतिशतभन्दा कम व्यापार भएको बताए। उनको पसलमा चस्मा, घडी, मोबाइल आदि पाइन्छन्। 'व्यापार चौपट भयो यसपालि,' उनले भने, 'घटस्थापनापछि केही होला कि भन्ने आश छ।' गोंगबुस्थित गुदपाक भण्डारका राजेश ठकुरी पनि व्यापार सुक्खा भएकाले चिन्तित थिए।
न्युरोडस्थित विपिन वेयर्सका विपिन सिंह भने सन्तुष्ट नै थिए। 'लेडिज वेयरमा वान पिस, जिन्स प्यान्ट र सर्ट–स्लिभ टिसर्ट बढी गइरा'छ,' उनले भने, 'मेन्स वेयरमा चाहिँ प्यान्ट, सर्ट र ज्याकेट बढी बिकेको छ।' उनले दिनको ३० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्मको व्यापार हुने बताए। स्मृति कोल्ड स्टोर, कलंकीकी हरिमाया सुवेदीले पानी, लेज र पाउँ राम्रै गइरहेको बताइन्।
के रमाइलो छ र?
पर्सा, जीतपुरका राजकुमार घिमिरे नारायणी यातायात व्यवसायी संघद्वारा सञ्चालित टाटा सुमो सेवाको बल्खु शाखास्थित कान्उटरमा उपरखुट्टी लाएर पल्टिरहेका थिए। छेउमा हरियो रङको झोला ठडिएको थियो। 'एक बजे आउँछ रे भ्यान,' उनले भने, 'त्यतिञ्जेल यसो थकाइ मारौँ भनेर यहाँ पल्टिरा'को हुँ।' उनलाई यसपालिको दसैँ खासै रमाइलो लागेको छैन रे। दिक्क मानेर बसिरहेका थिए। 'महँगी यस्तो छ,' उनले व्यथा सुनाए, 'केटाकेटीलाई केही लग्न सकिएन। घर जान पनि मन छैन। पाइलै सार्न मुश्किल परिरा'छ मलाई।'
नयाँ बसपार्कछेउको सडकमा चस्मा व्यापार गर्ने दुर्गा दाहाललाई पनि चरीकोट जानै मन छैन। व्यापार सुकेकाले निराश भएकी उनी 'के मुख लिएर गाउँ जानु?' भन्दै थिइन्। 'अरू बेला खाली हात जाँदा त गाउँलेले कुरा काट्छन्,' उनको समस्या यस्तो छ, 'झन् दसैँको बेला! फूलपातीसम्म पनि व्यापार भएन भने गइँदैन यसपालि गाउँ। मनाइँदैन दसैँ।'